Tag: nyocha ndị ahịa | Martech Zone
Tag: nyocha ndị ahịa
Ị bụ onye na-ere ahịa, ị na-ere ahịa. Ị na-ere ahịa. Ma nke ahụ bụ naanị ya, ị na-eche na ọrụ gị agaala ma gaa n'ihu na-esote. Ụfọdụ ndị na-ere ahịa amaghị mgbe ha ga-akwụsị ire na mgbe ha ga-amalite ijikwa ahịa ha megoro. Eziokwu bụ, mmekọrịta ndị ahịa mgbe ire ere dị oke mkpa dị ka mmekọrịta presale. Enwere ọtụtụ omume azụmahịa gị nwere ike ịmụta iji meziwanye mmekọrịta ndị ahịa ya mgbe erechara ya. Ọnụ, omume ndị a bụ
Sọnde, Septemba 9, 2018 Sọnde, Septemba 9, 2018 Olivia Ryan
Ọma ahịa bụ a siri ike ahụmahụ, ọ bụghị naanị n'ihi na nnukwu ụdị kamakwa maka nkezi. Ma ị nwere nnukwu azụmahịa, obere ụlọ ahịa dị na mpaghara, ma ọ bụ ikpo okwu ịntanetị, ohere ị nwere ịrịgo nrịgo dị larịị belụsọ ma ị na-elekọta ndị ahịa gị nke ọma. Mgbe ị na-echegbu onwe gị na atụmanya gị 'na obi ụtọ ndị ahịa, ha ga-aza ngwa ngwa. Ha ga-enye gị nnukwu elele nke jikọtara ntụkwasị obi, nyocha ndị ahịa, na